Horudhac: Manchester City vs Fulham… (Sky Blue oo soo dhoweynaysa Kooxda goolasha ugu badan laga dhaliyey horyaalka xilli ciyaareedkan) – Gool FM
(Manchester) 05 Dis 2020. Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad ku soo dhawayn doonta kooxda Fulham Maqribinimada maanta Sabti ah, iyadoo labada kooxoodba ay kulanka soo gali doonaan iyadoo mid waliba ay u baahan tahay guul Premier League ah.
Soo noqoshada taageerayaashu waa inay sugaan reer Manchester, laakiin Man City ugu yaraan waxay fursad u heysataa inay si miisaaman ugu fiiro-dheeraadaan kulankan, maadaama ay martigelinayaan kooxda dhowaan soo dallacday ee Cottagers.
Manchester City ayaa markale waayi doonta Sergio Aguero, kaasoo kaliya ku soo bilowday labo kulan oo horyaalka ah tan iyo markii uu dhaawac xun ka soo gaaray jilibka bishii June.
Nathan Ake ayaa kursiga keydka ku soo laabtay Talaadadii kaddib saddex isbuuc oo uu la maqnaa dhibaato dhanka muruqa ah.
Tababaraha Fulham ee Scott Parker ayaa haysta koox buuxda oo taam ah marka laga reebo Kenny Tete oo muddo dheer garoomada ka maqnaa.
Daafaca Tosin Adarabioyo oo ay kala soo wareegeen Manchester City bishii September ayaa lagu wadaa inuu ciyaaro kulanka ay ka horjeedaan kooxdiisii hore.
>- Manchester City ayaa guuleysatay sagaalkeedii kulan ee la soo dhaafay oo ay wajahday Fulham tartammada oo dhan, iyadoo cel-celis ahaan ka dhalisay goolal dhan 27-3.
>- Kooxda Fulham ayaan wax guul ah gaarin 15 kulan oo ay wajahday Man City horyaal iyo koob labadaba, waxaana ay kala kulantay 3 barbaro iyo 12 Guuldarro.
>- The Whites kooxda lagu naynaaso waxay socdeen toddobo saacadood iyo 51 daqiiqo oo aysan wax gool ah ka dhalin Man City tartammada oo dhan.
>- Labada koox ayaa ku kulmay FA Cup wareeggiisa afaraad, ciyaar ka dhacday garoonka Etihad bishii Janaayo, iyadoo Man City ay ku badisay 4-0.
>- Manchester City ayaa heshay 15-dhibcood kaddib sagaal kulan oo ay ciyaartay horyaalka, waana heerkoodii ugu hooseeyey tan iyo fasal ciyaareedkii 2008-09, markaasoo ay heleen 13-dhibcood.
>- Waxa ay raadinayaan inay guuleystaan kullamo isku xigxiga ee horyaalka markii ugu horreysay tan iyo markii lix kulan oo xiriir ah ay adkaadeen intii u dhaxeysay bilihii July iyo September.
>- Shantii gool oo ay dhaliyeen kulankii ay todobaadkii hore la ciyaareen Burnley ayaa ah in la mid ah intii ay dhaliyeen horyaalka lixdii kulan oo ay warkaas ka hor ciyaareen.
>- Man City ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) 39-koodii kulan ee ugu dambeeyey oo horyaalka Premier League ay garoonkooda ku soo dhoweeyeen kooxaha horyaalka u soo dalacay, waxaana ay ka haystaan 35 guul iyo 4 barbaro.
>- Riyad Mahrez oo dhaliyey afar gool oo horyaalka ah, waa ciyaaryahanka kaliya ee in ka badan labo gool u dhaliyay horyaalka kooxda Man City xilli ciyaareedkan.
>- Haddii la soo xusho, Phil Foden ayaa safan doona kulankiisii 50-aad ee horyaalka Premier League, kaliya labo ciyaaryahan kale oo Man City ah ayaa gaaray heerkan ka hor dhalashadooda 21-aad.
>- Fulham ayaa guuleysatay labo ka mid ah afarteedii kulan ee la soo dhaafay horyaalka, yeelkeede waxa ay qaateen hal dhibic lixdeedii kulan ee furitaanka horyaalka.
>- The Cottagers kooxda lagu naynaaso ayaa isku dayeysa inay badiso kulammo Premier League oo isku xiga ee ay marti yihiin markii ugu horreysay tan iyo bishii Agoosto sanadkii 2013-kii.
>- Kooxda Scott Parker ayaa leh 7 dhibcood 10 kulan oo ay ciyaareen, taasoo laba dhibcood ka badan intii ay heysteen isla heerka xilli ciyaareedkoodii ugu dambeeyey ee Premier League ay ka ciyaaraan fasal ciyaareedkii 2018-19.
>- Waxaa laga badiyay 27 ka mid ah 28-koodii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League ay ka horyimaadaan lixda kooxood ee ugu sarreysa, iyagoo halka kulan ee kale barbaro la galay Kooxda Manchester United bishii Febraayo ee sanadkii 2014-kii.
>- Kooxda Fulham ayaa laga dhaliyey goolasha ugu badan horyaalka xilli ciyaareedkan waana 19-gool.
>- Fulham waxaa lagu abaal-mariyey shan rigoore oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, marka laga reebo kooxda Leicester oo dhalisay siddeed rigoore.